Fitsinjarana - Avy amin'ny Linux | Avy amin'ny Linux (Pejy 3)
Ny sary Ubuntu 18.04.1 LTS RC dia azo zahana amin'ny fitsapana ampahibemaso
Ny fanavaozana fikojakojana voalohany ho an'ny Ubuntu 18.04 LTS dia efa misy izao, andramo izao ny Ubuntu 18.04.1 LTS
SteamOS dia nohavaozina mba hanangonana ny vaovao rehetra ao amin'ny Debian 8.11
Valve, lavitra ny fandaozana ny fampandrosoana ny SteamOS, dia namoaka kinova vaovao miorina amin'ny fizarana GNU / Linux. Ao an-tsaina ny rafitra miasa Raha tianao ny lalao video ary tena gamer ianao, dia ho tianao ilay kinova SteamOS vaovao, miaraka amin'ireo fiasa vaovao an'ny Debian 8.11
Misy kinova vaovao an'ny ReactOS eto, fantaro ny vaovao sy ny fanatsarana rehetra miaraka amin'ny ReactOS 0.4.9
Fizarana Linux 5 hisintomana fiainana vaovao ao amin'ny solosainao ambany karama
Raha manana solosaina taloha ianao izay natokanao an-jorony na hadinonao na aiza na aiza ao an-tranonao dia azonao atao ny manala azy io ary manome azy fiainana vaovao
Ubuntu 17.10 Artful Aardvark dia mahatratra ny faran'ny tsingeriny, havaozy izao
Ubuntu 17.10 dia nahavita ny tsingeriny, tsy hanana fanavaozam-baovao intsony izy, asaina manavao ny Ubuntu 18.04 LTS
Peppermint OS 9: fizarana miompana amin'ny fampiharana cloud-based
Peppermint OS dia fizarana Linux maivana, mifototra amin'ny teknolojia Prism an'i Mozilla izy ary aseho ho toy ny solon'ny rafitra rahona.
Fizarana Linux 4 natao hilalaovana ny lohateny tianao indrindra
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia hizara aminao ny sasany amin'ireo fizarana Linux tsara indrindra namboarina mba hahafahana milalao amin'izy ireo.
Ireo mpampiasa OpenSUSE Tumbleweed dia mahazo LibreOffice 6.1, Mozilla Firefox 61 ary ireo fiasa vaovao maro hafa
Tamin'ity volana ity openSUSE Tumbleweed dia nohavaozina sivy mba hanatsarana fanatsarana maro, lazainay aminao ny pitsopitsony momba ireo fanavaozana ireo.
Debian GNU / Linux 9.5 "Stretch" vonona miaraka amin'ny fanavaozana fiarovana 100
Debian 9.5 "Stretch" dia misy ankehitriny miaraka amin'ny fanavaozana manan-danja izay misy fiatraikany amin'ny fiarovana an'ity fizarana GNU / Linux ity. Manokana, Debian 9.5 dia misy miaraka amin'ny fanavaozana fiarovana 100 sy fanamboarana hafa izay hanatsara ny traikefa an'ity distro GNU / Linux ity
Alohan'ny hahatongavan'ny OpenMandriva Lx 4, ireo mpampiasa OpenMandriva Lx 3 dia mahazo fanavaozana misy fanatsarana maro
Infographic: ampiasain'ny olona an-tapitrisany eran'izao tontolo izao i Ubuntu
Canonical dia namoaka infografika iray izay mampiseho ny fomba ampiasain'ny orinasa eran-tany ny Ubuntu.
Vonona ho an'ny mpampiasa liana amin'ny fomba ofisialy ny divay 3.12
Ireo mpamorona ny tetikasan'ny divay dia namoaka kinova vaovao an'ny sosona mifanentana malaza ho an'ny rindrambaiko Windows teratany amin'ny rafitra Unix.
Vao herinandro mahery kely lasa izay dia natomboka ilay kinova Recalbox 18.06.27 vaovao, izay tamin'ny alàlan'ny fanambarana iray tao amin'ny bilaoginy ofisialy
SUSE Linux dia ho isan'ny mpiara-miasa EQT ankehitriny, na dia tsy misy na inona na inona miova ho an'ny mpampiasa farany
Linux Mint 19 Tara dia misy amin'ny Cinnamon, Mate ary XFCE izao
Lazainay aminao ny pitsopitsony rehetra momba ny Linux Mint 19 Tara vaovao izay misy amin'ny tontolo sary telo samihafa izao
Azo alaina izao ny fanavaozana Raspbian vaovao
Tamin'ny alàlan'ny fanambarana ity fanavaozana vaovao ity dia naseho ampahibemaso izay misy fanamboarana bug maro, Raspbian no rafitra ofisialy
PureOS: fizarana iray misy rindrambaiko maimaimpoana fotsiny
PureOS dia fizarana maoderina sy mora ampiasaina Debian izay mampiasa rindrambaiko malalaka sy malalaka.
Ny rafitra fiasa tsara indrindra ho an'ny Raspberry Pi anao
Tsy ny olon-drehetra no tia Raspbian, ka izay no antony ampisehoanay anao anio ny sasany amin'ireo fizarana efa misy ho an'ny Raspberry Pi anao.
Ubuntu dia ampiasaina manerantany araka ny angon-drakitra fametrahana an'i Ubuntu 18.04 LTS Bionic Beaver
Ny data izay nangonina tamin'ny fametrahana ny Ubuntu 18.04 LTS Bionic Beaver dia nanomboka nihanazava ary eto dia atolotray anao izany
Ekipa Debiana mitady mpanakanto manan-talenta ho an'i Debian 10 Buster
Raha mpanakanto manan-talenta ianao dia izao no fotoana hanehoanao izao tontolo izao ny asanao, mitady anao ny mpamorona Debian 10 Buster
Ny kinova azo antoka an'ny Devuan 2.0 ASCII dia vonona
Andro vitsy lasa izay dia navotsotra ny kinova Devuan miorina amin'ny kinova 2.0 ary mitondra ny anarana kaody "ASCII" antsoina hoe ...
OS tsy misy farany: nandefa kinova vaovao ho an'ireo mpampiasa izay tsy manana fifandraisana tsara amin'ny tamba-jotra
Endless OS dia fizarana GNU / Linux izay tonga handrafitra ny fizarazarana nomerika, ary izao dia mifantoka amin'ny fanararaotana ny fifandraisana amin'ny tambajotra miadana
Ny MX-Linux dia OS iray natao ankehitriny miaraka amina birao kanto sy mahomby nefa miaraka amina fikirakirana tsotra sy maharitra ary fampisehoana mivaingana.
openSUSE Tumbleweed dia mahazo fanavaozana vaovao miaraka amina kernel vaovao
Ireo mpampiasa Ubuntu 18.04 LTS dia afaka mametraka Mesa 18.1.1 izao
Amin'izao fotoana izao dia azonao atao ny mametraka ny kinova vaovao an'ny Mesa 18.1.1 sary sokajy ao amin'ny rafitrao, eto izahay milaza aminao ny fomba hanaovana izany.
GeckoLinux dia mandefa ny kinova voalohany miorina amin'ny openSUSE Leap 15
Lazainay aminao ny antsipiriany rehetra amin'ny kinova GeckoLinux voalohany mifototra amin'ny OpenSUSE Leap 15
NixOS: fizarana GNU / LInux maivana sy maoderina
Ny NixOS dia iray amin'ireo fizarana GNU / Linux izay mety tsy dia fantatry ny beso na be mpitia toy ny sasany, saingy betsaka ny zavatra tokony hamboarina. Androany dia natokinay ity lahatsoratra ity mba hahitana ny tombontsoa atolotray ho anay ity tetikasa mahaliana ity ...
Ny kernel Linux 3.2 dia nohavaozina miaraka amina kinova vaovao saingy toa ny fanavaozana farany amin'ny andiany izao, fotoana tokony hanavaozana izao.
Ny Fedora 26 dia hitsahatra tsy handray fanohanana amin'ny 1 Jona, havaozina ankehitriny
Ny Fedora 26 dia mamarana ny tsingerin'ny fiainany atsy ho atsy ary hitsahatra tsy handray fanampiana, havaozina ankehitriny amin'ny kinova farany an'ity rafitra ity.
LinuxConsole dia fizarana Linux izay fenoina rindrambaiko malalaka sy lalao malalaka, miaraka amin'ny ankizy sy solosaina taloha. LinuxConsole koa dia manome fanohanana ireo karatra sary vaovao sy taloha.
Hifarana amin'ny 8 Jona ny fanavaozana ny fiarovana an'i Debian 17 Jessie
Hanao veloma ny fanavaozana ny fiarovana an'i Debian 8 isika Jessie, fantaro ny antsipiriany rehetra sy ny daty ho an'ny kinova LTS
Navoaka amin'ny 18.10 Oktobra ny Ubuntu Cuttlefish Cosmic
Ny datin'ny famoahana Ubuntu 18.10 samihafa dia efa nambara, fantaro ny antsipiriany momba ny tsingerin'ny fivelaran'izy ireo
Navoaka sahady ny kinova Voyager 18.04 GS LTS vaovao
Omaly dia navotsotra ny kinova Voyager Gamers vaovao, izay sosona fanaingoana Xubuntu noforonin'ny mpampiasa frantsay iray mba hahafahana mampifanaraka ny rafitra amin'ny filan'izy ireo ary rehefa nandeha ny fotoana dia nanapa-kevitra ny hizara ny soson-kevitry ny personalization amin'ny hafa aho.
Q4OS: fizarana loharano ambany izay toa Windows XP
Q4OS dia loharano mivelatra amin'ny alàlan'ny fizarana Linux Alemanina any Debian miaraka amina interface, maivana sy sariaka ho an'ilay mpampiasa vao manomboka izy io, manolotra tontolo birao antsoina hoe Trinity, fantatra ihany koa amin'ny hoe TDE Trinity Desktop Environment, mitovy amin'ny Windows XP sy Windows 7 mivantana.
Azo alaina izao ny kinova RoboLinux 9.2 vaovao
RoboLinux dia manana rindranasa izay anohanany ny tenany hamela ny fampiharana ny fampiharana Windows ao amin'ilay rafitra, ity "StealthVM" ity dia milina virtoaly amin'ny ankapobeny. Izany dia mihazakazaka any ambadika izay ahafahantsika mamorona virtoaly ny fanontana Windows.
CorvOS: fizarana GNU / Linux tena namboarina ho an'ny efitrano fianarana
Raha mila fizarana GNU / Linux vaovao ianao ary efa reraky ny efa misy dia manasa anao aho hahita zavatra vaovao miaraka amin'ny CorvOS.
Fedora 28 dia efa navotsotra tamin'ny fomba ofisialy fantaro eto
Omaly dia navotsotra tamin'ny fomba ofisialy ny kinova vaovao an'ny Fedora, nahatratra ny kinova miorina Fedora 28 izay anoloran'izy ireo fanitsiana sy fiasa vaovao amin'ity fizarana Linux mahafinaritra ity. Tsy isalasalana fa nametraka ny tenany ho fizarana Linux matanjaka sy matanjaka i Fedora
MagpieOS: fizarana Bangladeshi miorina amin'ny Arch Linux
Androany isika dia hanararaotra mijery ity distro Linux izay vaovao ity. MagpieOS dia fizarana Linux noforonin'ny tanora bangladeshi, noforonina izy io miaraka amina tanjona tsotra dia ny namorona ny fizarana Linux azy manokana.
Ny fitaovana hanamboarana ny kapila mafy anao Clonezilla 2.5.5-38 Stable dia misy izao
Clonezilla dia rindrambaiko mitovy amin'i Norton Ghost izay, tsy tahaka an'ity Clonezilla ity, dia loharano malalaka sy malalaka satria mifototra amin'ny andiana tetikasa loharano misokatra, toy ny Partition Image. Izy io dia manana kinova roa: ny sary mivantana ary ny iray hafa dia ny fanontana mpizara.
Nahazo ny famoahana Point voalohany ny GNOME 3.28
Ny GNOME 3.28, ny kinova farany an'ny tontolo malaza sary, dia nahazo ny Point Release voalohany ary vonona ny hiditra amin'ny toeram-pivarotana ofisialy.
Ubuntu 18.04 LTS dia mamela ny mpampiasa hisafidy eo amin'ny fametrahana tsotra sy kely
Ankehitriny ianao dia afaka misafidy eo amin'ny fametrahana kely na fametrahana tsotra avy amin'ny efijery fametrahana Ubuntu 18.04 LTS
Beta farany an'ny Ubuntu 18.04 LTS azo alaina izao
Ny beta farany an'ny Ubuntu 18.04 dia eto ary herinandro vitsivitsy monja isika alohan'ny hahatongavan'ilay kinova ofisialy.
MinerOS GNU / Linux: Rafitra fiasa ho an'ny fitrandrahana nomerika (MilagrOS)
Miarahaba, mpikambana ary mpitsidika an'ity bilaogy lehibe sy malalaka manerantany ity amin'ny Free Software sy GNU / Linux. Aorian'ny…
Ahoana ny fomba hananana ny vola amin'ny kinova Linux Mint
Mpampiasa Linux Mint aho ary hatramin'izao dia tsaroako fa tamin'ny kinova distro teo aloha dia efa tonga ...
Anarchy Linux: Archive Revolutionizing
Rehefa afaka kelikely tsy nanova ny distro amin'ny solosainako noho ny fitsapana kalitao ataonay ...
Ao amin'ny tontolon'ny Linux dia misy distro ho an'ny tsirony sy ny filàna rehetra, ka mety foana ny mitady iray ...
Ny torolàlana 20 amin'ny fametrahana Gentoo
Ny fizotry ny fametrahana Gentoo izay nianarako nampiofana isaky ny fametrahana. Fototra tsara, saingy tokony hanokatra varavarana amin'ny tontolo vaovao.
Gentoo: Satria tsy misy lafatra
Tahaka ny toerana rehetra, sy ny fiaraha-monina dia tsy misy mety tonga lafatra, fa eto kosa no hampiharantsika ny sasany amin'ireo angano nanodidina an'i Gentoo efa ela.
Gentoo: Maninona ianao no tsy mila Gentoo ISO hametraka azy?
Satria ny ISO no ampahany voalohany amin'ny fametrahana, tsy afaka nandany ny fotoana hilazana aminao kely momba ny nanombohantsika tao amin'ny Gentoo izahay.
Loharanom-pahalalana Gentoo: Ahoana ny fomba fananganana kernel anao nefa tsy andramana
Ny kernel no ivon'ny fizarana Linux rehetra, satria mampifandray ny fitaovanao rehetra amin'ny rindrambaiko izay mihazakazaka eo amboniny ianao, noho izany dia ilaina ny fikirakirana azy.
Gentoo: fon'ny bibidia
Ny rafi-pitantanana fonosana, Portage, dia iray karazana ary mamela ny mpampiasa Gentoo hahazo tombony betsaka amin'ny fanangonana ny programa tsirairay.
Gentoo: Fa maninona no nisafidy ny handrafitra ny programa nataoko manokana aho?
Maninona ny compilation no tokony ho safidinao voalohany rehefa manana solosaina moderina be ianao na iray manana fotoana be dia be ao anaty. Ny tombotsoan'ny Gentoo Linux.
Gentoo Linux: Ny tantaran'ny dia iray
Ny tantarako Gentoo Linux, dia manerana ny tontolon'ny Linux, sy ny maro hafa.
Ao amin'ny lahatsoratra Aiza no hividianana singa elektronika an-tserasera? Nolazainay fa manangana laboratoara elektronika izahay, izay atambatra ihany koa ...
Resy lahatra aho fa ny ankamaroan'ny mpamaky FromLinux dia nahare momba ny Wifislax64 ary misy ny sasany ...
Voyager 16.04.3: distro maivana sy tsara tarehy miorina amin'ny Xubuntu
Ny hatsarana sy ny fahazavan'ireo disto miorina amin'ny Linux dia nihatsara haingana, lasa ny fotoana ...
Linux Lite 3.4: Tena maivana, havaozina ary Ubuntu-based
Andro vitsy lasa izay dia nandany fotoana be aho nanandramana distro antsoina hoe Linux Lite izay efa ao amin'ny version 3.4, ny ...
SparkyLinux 4.6, ilay distro mifototra amin'ny Debian maivana, misy
Debian 9 dia nitondra fanatsarana sy fanamboarana maro, izany no mahatonga ny distros mifototra amin'i Debian ...
Betsaka ny fitiavako an'i Linux Mint, efa ela no nifandimbiasana ...
MX Linux: distro haingana sy sariaka miaraka amina fitaovana mahatalanjona
Avy amin'ny firaisan'ny antiX sy ireo vondrom-piarahamonina MEPIS taloha, teraka ny MX Linux tena mahavariana https://mxlinux.org/ teraka, izay mampiasa fitaovana tsara indrindra ...
Misy ny kinova Alpha an'ny Trisquel GNU / Linux 8.0 «Flidas»
Betsaka no hahafantatra an'i Trisquel, ny fizarana GNU / Linux miorina amin'ny Ubuntu ary ny Free Software Foundation dia manaiky fa maimaim-poana 100%, ny ...
SUSE Linux Enterprise 12 SP2 misy
Faly be izahay afaka nahita ny fandefasana ny SUSECON 2016, izay azo alaina avy amin'ny SUSE Linux Enterprise ...
Misy Arch Linux 2016.11.01 miaraka amin'ny Linux Kernel 4.8.6
Tamin'ny alàlan'ny softpedia no nahitanay fa ny kinova Arch Linux 2016.11.01 dia azo alaina ankehitriny, ny ...
Bodhi Linux 4.0.0 misy: distro maivana miorina amin'ny Ubuntu
Nanomboka omaly, Bodhi Linux kinova 4.0.0 dia azo alaina, izay miorina amin'ny ...
openSUSE Tumbleweed dia manatsara ny serivisy Audio, Graphics ary fifandraisana
Androany aho dia nifoha tamin'ny vaovao nahafinaritra fa misy ny OpenSUSE Tumbleweed Snapshots vaovao (efa omaly), ...
Inona no hatao aorian'ny fametrahana Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn
Ireto misy zavatra tokony hataonao aorian'ny fametrahana vaovao Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn.
Plasma Mobile dia efa zava-misy
Tsy maintsy miteny aho fa faly. Andro vitsy lasa izay, nahita ny fivoaran'ny Plasma Mobile niaraka tamin'ny tetikasa Plasma Phone, dia naneho hevitra momba ...
Ubuntu 14.10 (sy fianakaviana) azo alaina amin'ny fanavaozana ny fampidinana sa tsia?
Ny Ubuntu 14.10 sy ny fianakaviana dia azo alaina izao, ka manontany tena izahay hoe ilaina ve ny manavao azy io? Andao hojerentsika izay vaovao.
Linux Semplice: fanoloana ny Crunchbang?
Tsy dia liana amin'ny fizarana minimalist aho, na ny tena izy, izay tonga amin'ny alàlan'ny Window Manager for ...
Ubuntu 15.04 Vermet Vivid, inona no antenaina?
Manakaiky ny fandefasana kinova Ubuntu vaovao, toy ny tamin'ny volana aprily 2015 dia toy ny efa ...
Azonao atao izao ny mitsapa ny Ubuntu amin'ny tranokalanao
Canonical amin'ny faniriana hanome traikefa akaiky kokoa amin'ny fizarana malaza Ubuntu Linux, ity orinasa ity dia mamorona ...
Antergos dia efa miraharaha ny fisehon'ny KDE
Nampiasa Archlinux nandritra ny 2 taona mahery aho nefa tsy nanova ny fizarana, ary hatramin'ny nahitako an'izany niaraka tamin'i Antergos ...
Azo Manjaro 0.8.13 ..
Navoaka androany ny Manjaro kinova 0.8.13 miaraka amina fanovana milay kely. Atorinay anao ny sasany amin'ireo vaovao….
Taratra kely momba ny Elementary OS Freya sy Antergos 2015.04
Manoratra ity lahatsoratra ity aho hizara aminao taratra kely (sy ny mason-tsivoko) amin'ny antsipiriany sasany izay misy ...
Eto ny OS Apricity amin'ny endriny marin-toerana!
Tao amin'ny lahatsoratra iray lasa teo dia niresaka momba ireo fiasa nohatsaraina sy nampiana an'ny Apricity OS izahay tamin'ny vanim-batony. Ho an'ny…
NayuOS, solon'ny ChromeOS ho an'ny Developers
Nayu OS amin'ny tetikasa iray natao tao Nexedi (orinasam-pampandrosoana rindrambaiko) izay mikasa ny handrakotra ny serivisy rindrambaiko ...
[Famerenana kely] Testing Solus isan'andro: 0.201528.6.0
Teraka indray i SolusOS. Niaiky aho fa rehefa nahare momba an'i Budgie dia nieritreritra hoe: "iray hafa ... ho an'ny inona?" .. Indrindra mandinika fa mety ...
Mitsangàna ny maty: kanelina LMDE 2 sy LMDE 2 Mate
Tsaroako ireo andro izay namoahana voalohany ny LMDE (Linux Mint Debian Edition), mpampiasa Debian aho ary…
Uruk: Loharano misokatra feno miaraka amina endri-javatra vaovao
Amin'ity tranga ity dia tianay ny hampahafantatra anao distro izay navoaka vao tsy ela teo amin'ny sehatry ny rindrambaiko maimaimpoana, ...
[Famerenana] Nitrux 7.15 misy
Tamin'ny alàlan'ny Google+ no nahitako (avy amin'ny mpanoratra azy ireo, Uri Herrera) fa ny Nitrux® 7.15 izao dia azo sintonina. Manana aho ...
Ubuntu CE: fizarana ho an'ny mpivavaka
Ubuntu CE dia fizarana miorina amin'ny Ubuntu, izay manome antsika fampiharana izay mifandray akaiky amin'ny fivavahana Kristiana.
Misy Tails 2.5 miaraka amin'ny Icedove 45.1 sy Tor Browser 6.0.3
Hatramin'ny androany dia misy ny Tails 2.5, izay kinova fanamboarana bibikely izay efa nivoatra ...
KDE Neon, Plasma 5.7 miaraka amina fototra miorina
Fantatsika rehetra ny tontolon'ny birao KDE, iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny distro Linux. Hoan'ny ...
AmayaOS, Rafitra miasa tsy manam-paharoa
AmayaOS dia System Operating vaovao, karazana UNIX, ary lozisialy 100% maimaim-poana miaraka amin'ny GNU GPL v3 Lisansa izay…
Linux Mint 18, fanontana MATE amin'ny dingana beta
Manolotra anao Linux Mint 18 na Linux Mint 18 "Sarah" fanontana MATE, ny kinova vaovao amin'ity distro ao ...
Manjaro Linux fanontana 16.06
Tonga ny kinova vaovao an'ny distro Manjaro, ao amin'ny fanontana 16.06 ho toy ny kinova miorina ary antsoina hoe Daniella. TO…
Chrome OS dia hampandeha fampiharana Android amin'ny Chromebooks
Amin'izao Chromebooks sasany izao dia azonao atao ny misintona ny rindranasa Android. Eny, izao dia azo ampiharina amin'ny Chromebooks sasany ireo rindranasa ireo;…
Ataovy farafaharatsiny farafaharatsiny miaraka amin'ny distro Bodhi
Anisan'ireo fizarana tsy misy farany misy ao amin'ny Linux, ny tsirairay dia noforonina tamin'ny hevitra hanatsarana ny iray ...
Nandritra ny herinandro vitsivitsy, ny kinova 16.03 an'ity distro fiaviana tsy miankina ity dia misy ary mivantana avy any Netherlands, ...
Apricity OS, distro kanto sy manintona
Ny Apricity OS dia azo faritana ho rafitra miasa maoderina sy intuitive, miaraka amina fidirana tsara amin'ny serivisy rahona….
Fantaro ny IP-bahoakao amin'ny terminal
Ahoana ny fomba hahalala na hijery ny IP ho an'ny daholobe avy amin'ny linux, nefa tsy mampiasa ny navigateur mankany ...
RaspEX: Layout ho an'ny Raspberry Pi 3 miaraka amin'ny fampifanarahana aoriana
Ho an'ireo izay mampiasa na te hampiasa Raspberry, dia asehonay ny RaspEX, ny rafitra natao ho an'ity solosaina mini ity, ary koa ...
Ny Canonical dia manamboatra marefo vaovao 7 hita ao amin'ny Ubuntu
Nanjary fantatra fa Canonical dia afaka mamantatra bug na fahalemena isan-karazany ao amin'ny rafitra Ubuntu. Ny lesoka no hita ...
Navoaka i AmayaOS 0.08
AmayaOS dia rafitra fiasa UNIX, fa tsy mifototra amin'ny GNU / Linux, natao hiasa indrindra amin'ny solosaina miaraka amin'ny ...
Tamin'ny 20 febroary, nojirika ny distro malaza, Linux Mint. Vaovao izay nambaran'ny talen'ny ...
OS Maru. Android sy Debian, ao anaty fitaovana iray.
Efa niresaka momba ny fampifangaroana novolavolain'i Ubuntu ho an'ireo Takelaka vaovao misy azy izahay teo aloha. Ny Convergence, andrasan'ny mpampiasa ...
Misy ny Korora 23!
Ny remix malaza an'ny Fedora, Korora, dia ao anatin'ny andiany faha-23! Rehefa afaka 3 volana taorian'ny nanombohana ny ...
Slackware 14.2 dia azo alaina amin'ny kinova beta
Andro vitsy lasa izay dia navoaka ny kinova beta an'ny Slackware 14.2, ity dia iray amin'ireo ...
Linux Deepin OS 15 Tsara sy mandeha
Andro vitsy lasa izay dia natomboka ny Deepin 15 OS, rafitra iray natao hampiasain'ny mpampiasa farany sy ...
Linux Mint 17.3 "Pink" sy ny vaovaony
Linux Mint dia iray amin'ireo fizarana izay naharesy ny safidin'ny ankamaroan'ny vondrom-piarahamonina ...
Top 10: fizarana Linux an'ny 2015
Hanombohana ny taona 2016, tsara ny mahatadidy ny fahaizan'ny 2015 ho an'ny fiarahamonina Linux sy…
Solus 1.0 OS ny distro GNU / Linux miaraka amin'ny tontolo iainany sy samihafa
Roa taona mahery lasa izay no tsy nanjavonan'i SoluOS fa Ikey Doherty (ilay teo ambadiky ny Solus 1.0 OS) tsy ...
Qubes OS sy ny fiarovana azy mitokana
Ny hackers, ny masoivohom-panjakana ary ny malware maloto dia afaka manangona ny soritry ny nomerika rehetra izay ampitaina amin'ny solosaina, ...
Isaky ny misy ny rafi-pitantanana ataontsika, ny safidy hodinihinay aorian'ny fanandramana manamboatra azy dia ny fametrahana indray ...
Sekoly Linux: Rindrambaiko maimaim-poana amin'ny fanabeazana fototra
Escuelas Linux dia fizarana noforonina teo ambanin'ny mombamomba ny fampiasana rindrambaiko maimaimpoana, miompana amin'ny tanjona fanabeazana. Is…
Misy Red Hat Enterprise Linux 7.2
Red Hat kinova 7.2 dia misy izao, ny kinova navoaka tamin'ny tapaky ny volana novambra ary ...
Ny GECOS Suite dia mifototra amin'ny rafitra fiasa ary nampiana an'izany karazana fampiharana ho an'ny asa ...
Ny tontolon'ny fizarana Linux dia malalaka dia lehibe, mpamorona maro be manerantany no nanao ...
ReactOS, ny kinova Open Source an'ny Windows
Rehefa miresaka momba ny rafitra miasa Source Source, ny tena fahita dia ny Linux no voalohany tonga ...
Tails, ny rafitra fiasa azo antoka indrindra amin'ny fitetezana ny Deep Web
Fantatry ny ankamaroan'ny olona mahalala kely momba ny tontolon'ny informatika, Linux dia rafitra miasa azo antoka, saingy ...
Wily Werewolf, ny kinova Ubuntu 15.10 izay afaka mampalaza an'i Linux
Na dia Linux aza no rafitra fiasa azo antoka indrindra any, ary angamba koa azo antoka indrindra, ...
Izay tsy mbola nanandrana an'i Manjaro dia tokony, ary misy antony maro hafa noho ny hatramin'izay. Vao haingana ny ekipa no nanomboka ...
Misy Tanglu 3
Avy ao anaty lafaoro no misy an'i Tanglu 3 "Chromodoris", distro miorina amin'ny fitsapana Debian avy any Mathias Klumpp. Ity dia miaraka amin'ny ...
Kali Linux, suite fiarovana IT lehibe
Fantatra fa ny tontolo iainana GNU / Linux amin'ny ankapobeny dia manana fahaiza-manao lehibe ary azo ovaina amin'ny asa maro, manomboka amin'ny fampiasana ...
Misy Manjaro Cinnamon 0.8.13
Vitan'izy ireo indray izany. Amin'ity indray mitoraka ity miaraka amin'ny Kanelina. Ny ekipa Manjaro Linux dia namoaka birao iray hafa, efa ...
Misy Mageia 5
Taorian'ny fampandrosoana iray taona dia nivoaka ihany ny kinova Mageia vaovao, tompokolahy sy tompokovavy. Ny zava-baovao ...
Veloma Mandriva, Salama Fedora 22
Omaly dia fantatray fa hanakatona i Mandriva, ilay orinasa. Namaky fanehoan-kevitra mampalahelo be tao amin'ny twitter aho momba izany ary tsapako ...
Araka ny fantatry ny sasany, omaly sabotsy 25 aprily 2015, ny fialan'ny vaovao ...
OzonOS fizarana for videogames
Fantatra hatry ny ela fa ny filalaovana amin'ny Linux dia tsy maintsy mametraka zavatra maro ianao handefasana lalao Windows, Divay, Playonlinux, ...
Vaovao fohy 2 Debian
Etsy ankilany, taorian'ny fifidianana nampiady hevitra indrindra tato anatin'ny volana vitsivitsy, nandray azy ny Komity teknika ...
Fitsanganana amin'ny maty: Crunchbang ++, Bunsen Labs ary Bodhi Linux 3.0.0
Andro vitsivitsy no lasa taorian'ny fanambarana ny fampitsaharana ny Crunchbang, hatramin'ny tsy fanandramana iray fa indroa ...
Nanapa-kevitra ny tsy hampivoatra ny Crunchbang intsony aho. Tsy fanapahan-kevitra mora izany ary nametraka izany nandritra ny volana maro aho. Sarotra…
Ikey Doherty dia mpamorona Linux Mint tena mavitrika; manokana ny LMDE, na izany aza nanapa-kevitra ny hiala noho ny antony manokana sy ...
Gentoo dia fizarana Linux sy BSD izay tena manisa hatramin'ny nananganana azy tamin'ny taona 2002, ary ...
Debian Jessie: Ampiasao aorian'ny hatsiaka
Salama daholo, androany tonga aho hilaza aminao ny zavatra niainako tamin'ny fiverenako tanteraka amin'ny fizarana ...
Tanglu 2.0 «Bartholomea» Navoaka
Kinova vaovao Tanglu, fizarana miorina amin'ny Testing Debian
Manoro anao torohevitra vitsivitsy izahay handinihana ireo rindranasa izay mety ilainay aorian'ny fametrahana ny Fedora 21 amin'ny solosainay.
Chromixium: ChromeOS natsangana tao amin'ny Xubuntu
Chromixium dia tetik'asa hamerenana ny fampiasa sy fisehoan'ny Chrome OS Google amin'ny birao mahazatra GNU / Linux.
OpenRC ao amin'ny Manjaro isos ho an'ny Systemd haters
Ny Community Manjaro dia namoaka ISO maromaro miaraka amin'ny mampiavaka azy ireo fa tsy mampiasa Systemd ho init, fa OpenRC, ny rafitra fanombohana ampiasain'i Gentoo.
[HUMOR… sa tsia] Fandraisana an-tsoratra ao amin'ny Debian: Ny adihevitra momba ny fifidianana (fizarana faharoa)
Ny paozy parodiantiana safidy Debian raha tokony hanohana inits maro izy ireo
Linux Mint 17.1 Cinnamon RC misy, andao jerena izay vaovao
Linux Mint 17.1 Cinnamon RC dia azo sintonina miaraka amina vaovao marobe ho an'ireo mpampiasa azy. Atorinay anao izay tena ilaina indrindra.
Kano: Ento manakaiky ireo ankizy kely amin'ny solosaina amin'ny fomba didaktika
Kano dia tetikasa iray izay mampanakaiky ny trano kely indrindra amin'ny solosaina sy ny singa ao aminy amin'ny fomba didactic, amin'ny alàlan'ny Kit feno.
Tena mangatsiaka sy zavatra hafa i Debian Jessie
Vaovao fohy momba ny hatsiaka Debian Jessie.
openSUSE 13.2 dia misy izao ary amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fisintomana sy ny fikirakirana azy amin'ny alàlan'ny torolàlana aorin'ny fametrahana azy
OpenSUSE Tumbleweed vaovao dia vonona ny hisintona fa ankehitriny amin'ny kinova Rolling Release. Atorinay anao ny fomba fampidinana azy, ampifanaraho ary amboary.
Trisquel 7.0 sy OpenSuse 13.2. Ny roa avy ao anaty lafaoro.
Navoaka ny OpenSuse 13.2 sy Trisquel 7.0
OpenSuse Factory: Inona no hatao aorian'ny fametrahana azy?
Asehonay aminao ny zavatra azonay atao mba hahatonga ny fizarana OpenSuse Factory hiomana tsikelikely. Tsy fantatrao hoe inona izany? Lazainay aminao eto.
Famerenana: Ubuntu Mate Beta 2, birao iray ho an'ny olona tsy mankasitraka
Izahay dia mijery ny Ubuntu Mate Beta 2 ary mampiseho ny sasany amin'ireo mampiavaka azy, ary koa ny endrika sy ny fahombiazany.
Niverina tany Gnome i Debian
Hiverina ao amin'ny GNOME i Debian Jessie ho birao misy anao.
Navoaka i AmayaOS 0.06
AmayaOS dia rafitra fiasa UNIX afaka mihazakazaka haingana amin'ny 75MHz Pentium I sy 16MiB RAM.
Antergos: ny fizarana izay atolotray ho an'ireo mpampiasa Arch
Antergos dia ny ArchLinux izay Linux Mint mankany Ubuntu, izany dia ArchLinux fa mora kokoa. Atorinay anao izay tombony sy safidy ary tombony azo.
Veloma ry Bodhi Linux?
Nanambara i Jeff Hoogland, mpamorona mpitarika Bodhi Linux, fa hiala eo izy.
Porteus dia ao anatin'ny vondrona voafantina fizarana Linux natao ho haingana sy mora entina.
Linux Mint Debian Edition dia handao an'i Debian Testing ary hiorina amin'ny Stable
Ny ekipan'ny Linux Mint dia nanambara fa hitsahatra amin'ny alàlan'ny andrana Linux Mint Debian Edition amin'ny sampana Testing an'ny Debian izy ireo ary hamindra izany any Stable.
openSUSE Factory: famotsorana distro vaovao
Openuse Factory dia lasa fizarana famotsorana vaovao
CentOS 7 final izao dia azo sintonina
Mbola tsy natomboka tamin'ny fomba ofisialy izy io, saingy azo sintonina izao ny Centos 7. Avelanay ireo rohy fampidinana ho fahafinaretanao.
Manjaro Fluxbox: Community Edition 0.8.10 fandefasana
Navoaka i Manjaro Fluxbox misy kalitao sy fiasa mahafinaritra be dia be, nohatsaraina ny fanombohana sary ary namboarina ireo lohahevitra vaovao.
Distros ho an'ny fanabeazana: safidy mety tsara
Mampiseho ny sasany amin'ireo distro ho an'ny fanabeazana azonay ampiasaina amin'ny fampiasana ny kely indrindra amin'ny trano izahay. Andao hojerentsika ny antony.
Linux Mint 17 Torolàlana momba ny fametrahana aorian'ny fametrahana ireo mpampiasa vao manomboka amin'ny Linux.
Teo aloha 2014.05.26 misy amin'ny vaovao tsara
Antergos 2014.05.26 tonga feno vaovao miaraka amin'ny tsiro vaovao amin'ny tontolo Desktop, zavakanto fisaka sy mitandrina be, noho ny tetikasa Numix.
Kanelina ho an'ny Ubuntu: veloma amin'ny PPA misy anao
Tsy ho voatazona intsony ny PPA maharitra kanelina ho an'ny Ubuntu
Chakra Linux Descartes azo alaina
Chakra Linux Descartes, fizarana pro-KDE tsara tarehy hita ankehitriny, efa azo. Manoro hevitra anao izahay.
Plasma Manaraka: Fitsapana izay ho avy amin'ny ho avy KDE
Izahay dia nanandrana ny ISO an'ny tetikasa Neon, izay mampiseho aminay hoe ho toy ny ahoana ny Plasma Next sy ny asa efa nataon'izy ireo. Izahay dia mamela anao ny fiheveranay.
Wayland dia ho tonga tampoka ao amin'ny Fedora 21
Wayland dia ho tonga tampoka ao amin'ny Fedora 21, miaraka amin'i Gnome.
Lubuntu 14.04: lazaiko anao ny zavatra niainako
Te hizara aminao ny zavatra niainako tamin'ny Lubuntu 14.04 tamin'ny solosaina taloha ananako tao an-trano aho. Ny valin'ny fanadihadiana nataoko dia ...
UbuntuStudio sy Edubuntu: olon-tsy fantatra roa
Rehefa miresaka momba ny tsiron'ny Ubuntu isika dia manonona foana ny Kubuntu, Xubuntu, ary ireo karazany hafa toa an'i UbuntuStudio sy Edubuntu dia hadino.
Mageia 4: distro horaisina
Tamin'ny zavatra niainako dia nankafiziko ny distro Mageia hatramin'ny nanombohany, ary mila milaza aho fa tena nilamina sy tonga lafatra ho ahy izy io. Andao hojerentsika ny antony.
Xubuntu: Ny zavatra niainan'ny mpampiasa iraisana
Izahay dia mizara ny zavatra niainan'ny iray amin'ireo mpampiasa anay amin'ny fampiasana Xubuntu. Andao hojerentsika ny antony, ny tombony sy ny fatiantoka hitanao amin'ity fizarana ity.
Ubuntu 14.04: Famerenana fohy momba ny zava-bita, ny fanjifana, ny endrika ivelany ary ny azo ampiasaina
Notsapainay tsara ny Ubuntu 14.04 ary navelanay ny fiheveranay ny zava-bita, ny fanjifana, ny endrika ivelany ary ny fampiasana azy. Ny vokatra azo ekena.
Fampisehoana vaovao 14 izay ho hitantsika ao amin'ny Xubuntu 14.04
Tao amin'ny bilaogin'i Sean Davis dia nahita lahatsoratra mahaliana iray izay nanehoany endrika vaovao 14 ho avy ao amin'ny Xubuntu ...
Ahoana ny fametrahana Android 4.4 amin'ny solo-sainanao Linux
Android-x86 dia tetik'asa mifantoka amin'ny fametahana Android hahafahany mandeha amin'ny netbook, solosaina finday ary ...
arkOS: rahona "manokana" anao
Ny Raspberry Pi dia midika revolisiona eo amin'ny tsenan'ny teknolojia satria mamela hahazo solosaina micro, ny haben'ny ...
Azo alaina ao amin'ny Community Edition Manjaro Fluxbox 0.8.9-1
Salama daholo, faly aho fa afaka nampahafantatra anao ny fanombohana vaovao ny Community edition Manjaro Fluxbox 0.8.9-1 ao…
Safidy 5 hifindra monina avy amin'ny Windows XP mankany Linux
Nanambara i Microsoft fa hijanona tsy hanome fanampiana ho an'ny Windows XP amin'ny 4 aprily, midika izany fa ...
Aiza no ahazoana ny lisitry ny solosaina finday mifanentana amin'ny Linux?
Andro vitsy lasa izay, namana iray mipetraka any Arzantina dia nanontany ahy tamin'ny alàlan'ny mailaka mba hanome torohevitra vitsivitsy azoko omena azy ...
Fito volana taty aoriana ... Fedora sy ny Firenena misy embargo, eto indray isika.
Taloha dia nisy resabe momba ny fanohanan'ny Fedora ho an'ireo firenena mijaly noho ny embargo amerikana, izay nifarana ...
Misy KaOS 2014.03 miaraka amin'ny Artwork vaovao
KaOS dia manana kinova vaovao, na ny tena fametrahana ISO fametrahana vaovao, miaraka amin'ireo fonosana nohavaozina izay ...
Habemus Tanglu 1.0, Manjaro 0.8.9 ary RC avy amin'ny LMDE
Nanao vakansy nandritra ny faran'ny herinandro aho ary nisy olona nametraka ireo famoahana faran'ny herinandro Ho an'ny…
Evolve OS: Tetikasa iray hafa avy amin'ny tanan'i Ikey Doherty
Mbola tsy mazava amiko ny antony nametrahan'i Ikey Doherty Vondrom-piarahamonina iray manontolo tamin'ny alàlan'ny ...
[HUMOR] Systemd vs Upstart, natao tao Debian ny adihevitra
Ry mpampiasa Linux malala, takatray fa vonona ny zava-drehetra amin'ity fampitahana ity izay handrefesana ny Systemd sy ny Upstart ...
Mageia 4 misy
Ny kinova fahaefatra amin'ity taranaky Mandriva ity dia misy nanomboka omaly.
Misy tranokala KaOS ISO 2014.01
Avy amin'ny tanan'ny Yoyo308 mihaino sy manavao hatrany no ahitantsika ny vaovao (iza koa?) Momba ny fandefasana ...
Fanambarana avy amin'i David Tavares, mpamorona PearOS. Nadikan'i Rosa Guillén, natambatr'i Yoyo Pear OS sy Pear Cloud efa ...
Linux Mint 16 ary taratra kely
Salama daholo! Araka ny voalazan'ny lohatenin'ilay lahatsoratra dia hiezaka aho handinika kely ny Linux Mint ...
Ireo distro tsara indrindra ho an'ny netbook
Tsy toy ny Windows na Mac, Linux dia manana fizarana isan-karazany izay mampiasa tontolo iainana sary sy fampiharana samihafa ...
Mikasa ny handika ny LFS (Linux From Scratch) ve ianao?
Linux From Scratch dia fomba fametrahana rafitra GNU / Linux amin'ny alàlan'ny famolavolana tanana ny singa rehetra. Mazava ho azy fa ...
CentOS: Powered by Red Hat (sy ny fiarahamonina)
Dika fohy sy tsotra: Fayerwayer: "Mihamangatsiaka ny tontolon'ny Linux, hampiditra ny clone" CentOS "ho azy ny Red Hat."
Fitsinjarana GNU / Linux tonga lafatra: openSUSE 13.1 !!!
Salama namana, tamin'ity volana ity aho dia volana iray somary misavoritaka nitsambikina tamin'ny PC-ko sy ny solosaina findriko distro tao ...
Salama ry namana, manantena aho fa hahita volana tsara amin'ny Desambra ianao. Araka ny fantatrao tsara, ny mpiara-miasa aminay Yoyo Fernández ...
Inona ny Kubuntu? Kubuntu dia fizarana Linux izay mampiasa ny KDE ho tontolon'ny birao. Izy io dia novolavolain'ny Blue Systems ...
Inona ny atao hoe Xubuntu? Xubuntu dia 'distro' na 'tsiro' amin'ny fizarana malaza GNU / Linux, Ubuntu. Toy ny anaranao ...
Famerenana PearOS 8 (ny hevitro + pikantsary)
Salama daholo, fotoana vitsy lasa izay (tsy dia betsaka loatra) dia nivoaka ny PearOS 8, fa tsy nahasarika ny saiko ny fomba MacOS-like, ...
Ahoana ny fametrahana Ubuntu 13.10 Saucy Salamander tsikelikely
Raha vao manomboka amin'ny Linux ianao dia mety efa nanolorana anao hanandrana an'i Ubuntu: fizarana tsotra sy mora amin'ny ...
Ny Recipe-ko hitadiavana ilay Idistro Distro
Ny Distro idealy dia ilay distro izay tsy ho hitanao mihitsy, eo izy, fa tsy ho hitanao. Azonao fantarina daholo ...
Rehefa avy nametraka ny Fedora 19/20
Salama namana avy amin'ny desdelinux.net. Efa ela aho no nampiasa ny Fedora tamin'ny XFCE teo amin'ny PC-biriko ary ny solosainako nanolo ...
Iray volana miaraka amin'i Manjaro Linux
Salama ho an'ny mpamaky rehetra! Androany aho tonga mba hanao famerenana kely, na ny tena tsara, haneho hevitra momba ny zavatra niainako tamin'ny ...
Tanglu dia manohy mivoatra ary hanana fandefasana tsy ho ela isika.
Maty i SolusOS, saingy i Tanglu, iray amin'ireo tetikasa nojereko taloha ela be, dia mbola mivoatra ...
Coplas de Diazepan noho ny fahafatesan'i SolusOS
Misy zavatra maty ao am-panahy rehefa misy namana mandao ity tontolo ity. Ankehitriny dia efa mitehaka azy ...
Handoa vola amin'ny ElementaryOS ve ianao?
Manomboka ny lahatsoratra aho amin'ny filazako hoe avy aiza ny olana. Hita fa tamin'ny alàlan'ny G +, Daniel Foré (mpitarika ny tetikasa ElementaryOS) dia manontany ...
Ubuntu 13.10 Famotsorana hafa?
Rahampitso no andro andrasan'ny mpampiasa an-tapitrisany manerantany, mpampiasa Ubuntu mazava ho azy. Ary izany ve ...
Xubuntu Saucy Salamander Beta 2 misy amin'ny fanatsarana vitsivitsy
Na dia tsy mpampiasa Xfce intsony aza aho dia mila miaiky fa Xubuntu no iray amin'ny fizarana tsara indrindra anananao ...
Dax OS 2.0.2 ao anaty tsiro efatra azo alaina
Androany, ny kinova 2.0.2 an'ny Dax OS dia navoaka tamin'ny tsiro efatra rehetra, Desktop, Kids, Life ...
Azo alaina amin'ny fisintomana Zentyal 3.2
Zentyal (aka Ebox taloha) dia nanjary vahaolana tena tsara ho an'ny SME noho ny fiasa sy ny fanamorana ...
Ny Consort Desktop vaovao dia hampiasa QT
Salama GNU / Linuxmaníacos, elruiz1993 indray no mitondra anao ny zavatra farany nianarany. Ny andro ankehitriny…
Salama ho an'ireo mpamaky ny bilaogy rehetra, Jesosy no anarako ary ity no lahatsoratro voalohany ho an'ny DesdeLinux. Efa…
Tadidinao ve i SolusOS? Eny, izany fizarana izay noresahiko tamin'ny ora izany mandra-paharerahana, ...
Azo alaina ny test Tanglu LiveCD
Tadidinao Tanglu, izany fizarana izany no tiako nefa tsy niaraka tamin'izaho taloha? Tanglu dia distro miorina amin'ny ...
Dax OS Experimental: distro vaovao azo alaina
Ho an'ireo izay tsy mahalala Dax OS, lazao fa fizarana mifototra amin'ny Ubuntu, izay ampiasaina ho tontolo iainana ho an'ny ...
eOS - Ny fiandohan'ny zavatra lehibe iray?
Ao anatin'ireo fizarana miorina amin'ny Ubuntu dia teraka ny kintana iray miaraka amin'ny hazavany. Ary ity rafitra ity dia betsaka ny ...
SolusOS 2 Alpha8: ISO voalohany ho an'ny mpamorona sy mpizaha toetra
Efa elaela izay no tsy nanehoanay hevitra momba ny SolusOS 2. Ho an'ireo izay tsy mahatadidy, SolusOS dia nizara ...
Nefa afaka maimaimpoana ... Ny olan'ny Fedora any amin'ireo firenena voaroba.
SynFlag tao amin'ny bilaogin'izy ireo dia niresaka momba ny lohahevitra iray saro-pady. Ho tsy miandany araka izay azo atao aho dia avelako ny tenany ...
ZevenOS Neptune 3.2 misy
Efa nolazaiko anao ny momba an'i ZevenOS Neptune indray mandeha, fizarana izay mampiasa an'i Debian Wheezy ho toy ny fotony saingy izahay ...
Satria efa handeha hisotro ronono ny solosaina findaiko dia te hampiasa azy io ho toy ny toeram-pitsapana aho ary hametraka distro izay, ...
Manjaro Experience - OpenBox ary Pentium IV
Tsara tokoa. Tonga hilaza aminao kely momba ny zavatra niainako tao amin'ny GNU / Linux manana PC "ambany" aho. Fintino…
ElementaryOS Stable: fametrahana + famerenana
Omaly ny pandev92 dia mialoha ahy tamin'ny famerenana tsara momba ny ElementaryOS (manomboka izao amin'ny eOS), ka handeha aho ...
Os Luna Elementary, milamina ihany amin'ny farany! FAMERENANA
Nampiasa an'i Lubuntu aho tamin'iny andro iny, faly be, afa-tsy ny lesoka sasany azoko tamin'ny famindran-toerana ny fikandrana sasany….
Kaontera amin'ny tranokala eOS Efa hanana kinova miorina ve isika?
Niditra tamin'ny tranokala eOS (aka ElementaryOS) aho ary nahita tsotra sy tsara tarehy (tsy mety ...
SolidXK: distro Linux vaovao tsara indrindra?
Schoelje, izay mpikojakoja indrindra an'ity distro ity, dia niasa tamin'ny Linux Mint teo aloha, namorona ny kinova "tsy ofisialy" an'ny Linux Mint Debian ...
Nandany ny sabotsy sy omaly alahady manontolo aho tamin'ny fanamboarana ny PC sy ny fitsapana zavatra isan-karazany ary ny fizarana GNU / Linux. Toy ny…
Rakitra fametrahana slackware: Tsy ny zava-drehetra no jerena
Miarahaba antsika rehetra. Azo antoka fa nahita ahy naneho hevitra avy tamin'i Debian sy ny tiako ianao momba an'io distro sy ny hafa miaraka amin'ny ...
Ny fisian'ny Linux Mint Olivia dia vao navoaka tamin'ny kininy Xfce, izay miaraka amin'ny kinova ...
Ubuntu: Fahatsiarovana ny andro taloha
Azo antoka fa maro no mahita ny lohateny na ny mpanoratra an'ity lahatsoratra ity ary mieritreritra: Elav dia ho avy hanafika ...
Omaly aho nametraka ny fizarana malaza indrindra amin'ny GNU / Linux Rolling Release amin'ny iray amin'ireo solosaina miasa:…
Nanambady aho nandritra ny fotoana kelikely izay heveriko ho iray amin'ireo disko tsara indrindra amin'ny habaka GNU / Linux. Izy ireo…
Afaho ny birao amin'ny Fedora. Fedora dia rafitra fandidiana ampiasaina isan'andro, miavaka amin'ny faingam-pandeha, maharitra ...
Kajy Linux: nisy Amalgam teo anelanelan'i Sabayon sy Gentoo (nivoaka koa ny Fedora 19)
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny fampiasana Ubuntu sy ny fampiasana Debian dia toa kely raha oharina amin'ny tsy fitoviana amin'ny fampiasana Sabayon sy ...
Andramo ny Ubuntu sy Canaima avy amin'ny browser
Ho an'ireo mpampiasa vaovao tonga amin'ny GNU / Linux, iray amin'ireo zavatra izay mahatonga azy ireo ho sarotra kokoa ny mahatakatra ny ...
Linux Deepin: Angamba ny fizarana tsara indrindra hitako
Vao nahalala aho tamin'ny alàlan'ny Webupd8 momba ny famoahana ny Linux Deepin 12.12, fizarana sinoa miorina amin'ny Ubuntu 13.04 izay…
Sôkôla ho an'ny vaovao: RHEL 7 dia hampiasa ny birao mahazatra.
Vao tsy ela akory izay ny fihaonambe Red Hat 2013 ary misy antsipiriany vitsivitsy momba ny kinova ho avy naseho ...
Linux Mint 15 "Olivia" azo alaina
Andro vitsy lasa izay dia miresaka momba ny fisian'ny Linux Mint 15 «Olivia» RC izahay, ary vao nivoaka androany ...
ZevenOS Neptune 3.1 misy
Efa niresaka momba ny ZevenOS Neptune ao amin'ny DesdeLinux izahay, fizarana tena tsara mifototra amin'ny Debian izay nahatratra ny dikany ankehitriny ...
Navoaka i Mageia 3
Eny, araka ny filazan'ny lohateny, ny 19 Mey 2013 navoaka ny kinova fahatelo amin'ity distro ...
Alpha voalohany 4 an'ny Canaima misy
Salama maraina ho an'ireo rahalahiko rehetra ao amin'ny fiarahamonina Free Software sy Gnu / Linux. Angamba vitsy no ...
Linux Mint 15 "Olivia" RC Azo alaina ankehitriny
Vao tsy ela akory izay dia niresaka momba ireo fanovana natao tamin'ny Cinnamon 1.8 izahay, ary androany dia nanambara i Clem fa azo alaina ho an'ny ...
Noho ny antony miasa volana maro lasa izay dia tsy maintsy nampiasa Debian aho (izay tiako hatrizay, saingy nampiasa ...
Salama, elruiz1993 aho, angamba mampatsiahy ahy ny Classics toa an'i Pantheon ianao: Ny traikefa Elementary sy ny fomba ahazoana WiFi (karatra…
Raphaël Hertzog, iray amin'ireo mpamorona Debian manan-danja indrindra, dia nandefa tao amin'ny pejy fandraisana The Administrator Debian ...
Paaaaaaaaaain ny presse. Debian 7.0 Wheezy Navoaka
Inona no miaraka amin'ity kinova vaovao ity? * Apache 2.2.22 * Asterisk 1.8.13.1 * GIMP 2.8.2 * GNOME 3.4 *…
Sabayon 13.04 ary torolàlana vaovao amin'ny fisafidianana distro
Zavatra kely roa: Ny voalohany dia ny fanombohana ny iso vaovao Sabayon, ny distro miorina amin'ny Gentoo ...
Tahaka ny andrenesany izany. Tsy nisy na inona na inona nitranga hatramin'ny nanombohan'ny Raring Ringtail sy Mark Shuttleworth izay efa nampitandrina tao amin'ny ...
Fanalefahana endri-tsoratra sy qtgtkstyle Opensuse 12.3
Azo antoka fa mihoatra ny iray ny olona efa niaina, fa amin'ny distros dia tsy tokony, ho fitsipika ankapobeny manalefaka ...
Navoaka tamin'ny fiandohan'ny volana Mey i Debian Wheezy
Io dia nambaran'i Neil McGovern tao amin'ny lisitry ny mailaka ho an'ireo mpamorona Debian, satria toa ny rehetra ...
Nandritra ny fanoratako ny lahatsoratra teo aloha dia hitako ny momba an'io ary tena nahagaga ahy izany. Andrew Wyatt, mpamorona ny Fuduntu ...
Tsy hita ny hevitr'i Clem
Manuel de la Fuente dia efa niresaka momba ny fomba nandaozan'i Cinnarch sy i Manjaro an'i Cinnamon sy ny rehetra noho ny antony maro: 1)…
Ny kanelina dia mbola tavela irery: Manjaro dia manafoana ny fanontana nataony amin'ity birao ity
Omaly dia naneho hevitra momba ny vaovao izahay fa ny Cinnarch, fizarana mifototra amin'ny Arch Linux miaraka amin'i Cinnamon ho tontolon'ny birao, dia hiala ...
Siduction: fametrahana, fametrahana ary topimaso fohy
Mampiasa Debian aho, tiako i Debian ary misy tetikasa telo izay tena mahasarika ny saiko: Tanglu, izay efa noresahintsika, ZevenOS ...
Cinnarch dia iray amin'ireo maro amin'ireo distro boaty miorina amin'ny Arch Linux izay nipoitra nandritra ny taona maro ...
Taorian'ny nandaozako an'i Ubuntu roa herinandro lasa izay noho ny triaratra nanombohan'ny Compiz tamin'ny MPlayer nahatonga ahy ...
ZevenOS Neptune fantatra amin'ny anarana hoe Neptune dia sampana iray entin'ny vondrom-piarahamonina ZevenOS izay miorina amin'ny Debian ...
TSY mamporisika anao hanana rafitra fandidiana roa samy hafa hapetraka mivantana amin'ny kapila (kap). Ny tiako holazaina, raha tena fantatro ...
Fa maninona aho no mampiasa Debian eo amin'ny biraoko?
Misy antony sy fanoherana an'i Debian. Na izany aza, ireo mankasitraka dia avy ...
Debian Backports tafiditra ao amin'ny trano fitehirizana (main)
Vaovao tsara izay nandefasan'izy ireo tamin'ny mailaka, izay azonao vakiana eto amin'ny teny Anglisy ary nanandrana namerina aho ...
Araka ny fantatry ny sasany aminareo, izaho dia Debian, CentOS ary mpampiasa openSUSE indraindray. Ankehitriny, satria mampiasa CentOS aho dia manana ...
Tanglu Iray amin'ny iray amin'ireo sampahony?
Miaiky izany aho. Vao omaly aho no nahalala momba ity tetikasa vaovao antsoina hoe Tanglu ity ary faly aho (angamba maika). Fa i Tanglu ...
Ary ahoana, hoy ny lohateny, Tanglu dia fizarana vaovao izay hiorina amin'ny Debian Testing, ary ...
Ny ekipa Xubuntu dia namoaka ny beta voalohany ho an'ny Xubuntu 13.04, fizarana izay avy amin'ny ...
Salama namana avy amin'ny DesdeLinux. Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny fizarana openSUSE 12.3 :). Amin'ity lahatsoratra ity dia hasehoko anao ...
Tamin'ny 9 martsa 2013 dia navoaka ny kinova vaovao an'ny CentOS 6.4. Ity ambany ity ny fanambarana ofisialy ...
Rehefa avy nametraka ny Ubuntu 12.10 amin'ny solosainako hizaha toetra ny tsimbadika Unity nohavaozina ary hamarinina fa milamina izy (tsia ...
Miaraka aminao…. SolydXK
Najanona ny fanontana ofisialin'ny LMDE KDE sy Xfce. Tiako ny misaotra an'i Schoelje tamin'ny asa mahafinaritra izay…
CD kely Ubuntu
Ity mpampiasa ity dia navoakan'ny mpampiasa iray tao amin'ny Taringa izay miantso ny tenany hoe petercheco ary nangataka ahy hametraka azy ...
Tsy mijanona ny fampandrosoana Chakra, ary tsy mijanona koa ny Foko, mpanorina azy. Taorian'ny asa lehibe nametrahana ny zava-drehetra ...
Androany nolazaiko anao ny famotsorana ny RC voalohany an'ny Debian Installer ary nahita rohy aho ...
Navoaka i SolusOS 1.3
Ny ekipa SolusOS dia faly nanambara ny famotsorana ny SolusOS Eveline 1.3. Ity dia famotsoran-keloka fatratra, ary ...
Ny kandidà famotsorana voalohany an'ny installer Debian 7.0 dia navotsotra roa andro lasa izay, izay tsara ...
Miverina ny zaza !! Veloma ry Kubuntu, Salama Debian
Kubuntu dia naharitra herinandro latsaka tao amin'ny solosainako ary ny zava-misy tsotra dia ...
Azonao atao izao ny misintona ny Chakra 2013.02 "Benz"
Ny famakiana ny RSS-ko dia hitako tamin'ny bilaogin'i Marcel fa Chakra 2013.02 dia azo sintonina mandritra ny andro vitsivitsy…
Fitsapana an'i Kubuntu, lavitra ny tanan'i Canonical
Omaly dia nametraka Kubuntu 12.04 tao amin'ny Netbook asako aho, izany rehetra izany dia noho ny KDE 4.10 izay andramako ankehitriny ...
Efa mandeha toy ny afo mando amin'ny Internet ny vaovao hitondrako anao, ary rehefa tonga amin'ny Ubuntu ...
Eny, araka ny asehon'ilay lohateny, mitondra anao aho Script izay mamela ny famoronana DVD Debian fanao….
Izaho manokana dia nisafidy ny fitsapana an'i Debian saingy mitovy amin'ny an'ny sampana marin-toerana. Izaho aloha mamporisika ...
Efa mivoaka i Fedora 18
Farany, tara 2 volana, fa farany, nivoaka ny Fedora 18 Spherical Cow. Anisan'ireo zava-baovao hita ao aminy: GNOME ...
Salama, x11tete11x aho, ity no anjara birikiko faharoa, ary amin'ity indray mitoraka ity dia mitondra torolàlana momba ny fametrahana Gentoo ho anao aho ...
Isika izay tafiditra ao anatin'ny tontolon'ny GNU / Linux sy Free Software, dia zatra ny zava-misy isan'andro mahalala iray ...
Raiso ny nomeraon'ny mpampiasa Debian anao
Ianao ve efa nahita mpampiasa Ubuntu manana zavatra toa ny "Ubuntu User 526" amin'ny sary kely? Eny…
Amboary ny olana amin'ny Wifi (Broadcom 43xx) amin'ny ubuntu aorian'ny fanavaozana
Misy olona manana olana amin'ny ubuntu aorian'ny fanavaozana ny rafitra (Amin'izay aho miresaka momba ny tenako: - |). Inona no mitranga…
Mampiseho izany fa napetraka tamin'ny fotoana mety ny lahatsoratro momba ny CUTI satria tsy nisy lahatsoratra vaovao taorian'izay….
Firmware, ny ampahany nofy ratsy 3: Ahoana ny fametrahana Linux amin'ny milina misy fizarana boot Windowws efa napetraka
Mihoatra ny lahatsoratra hevitra dia fampianarana izy io, fa andao ny any ambadika. Tao amin'ny forum dia nilaza aho fa ...
Fanovana sy vaovao ho an'ny LinuxMint 15
Ny famakiana amin'ny Webupd8 dia hitako fa nohavaozina ny Roadmap ho an'ny Linux Mint 15, izay ahatongavan'izy ireo ...
Misy Slax 7 «Green Horn»
Navoaka ny Slax kinova 7.0, fizarana izay efa noresahintsika tato amin'ity bilaogy ity ary ...
Misy ny distro rehetra….
Ranomasina bytes dia nosoratana manodidina ny dinika nifanaovan'ny mpanohana ny ezaka mitambatra sy ny mpanohana ...
Fotoana vitsy lasa izay dia tonga tamiko io fanontaniana io, raha toa ka misy zavatra toa io azo atao. Androany aho nitety sy ...
Broccoli marevaka: Ity ve no anaran'ny Ubuntu 18.04?
Nanontany tena izahay rehetra hoe inona no hitranga rehefa lany anarana (kaody na lakile) i Ubuntu, be dia be vao vita ...
Fa maninona i Debian?
Ity misy lahatsoratra novakiako tao amin'ny bilaogin'ny humanOS izay nametrahan'ny mpanoratra azy ireo fepetra manokana ...
Eny ... Androany no itondrako anao ny fanahafana ny. bashrc .. Inona no tena mahaliana? Ny zavatra voalohany dia manana ...
Farany ary tsy nisy fanodikodinam-bola firy, ny systemd dia tonga tamin'ny ArchLinux. Hafatra iray ao amin'ny lisitra mailaka fotsiny dia ampy ...
Raha jerena ireo fampahalalana kely azontsika ianteherana rehefa manapa-kevitra ny hiditra amin'ny tontolon'ny Slackware isika, dia manana…
Elementary Luna Beta 1: Tsara tarehy tsotra
ElementaryOS no fizarana tokana rehefa hitako dia manosika ahy ho lany Debian + KDE, ary ...
Slackware 14: Manala ilay Monster
Azo antoka fa ny ankamaroan'ny mpampiasa GNU / Linux dia nanomboka ny diany tamin'ny làlan'ny penguin tamin'ny fizarana tsotra ...
Miverina ao amin'ny Gnome i Debian ho ny tontolon'ny Desktop misy anao?
Raha ny fahitana azy, ny fanoloran-tena nataon'i Christian Perrier dia manamafy fa hampiasa ny Gnome ho tontolo i Desktop indray i Debian ho…
Linux Mint 14 «Nadia» RC misy
Tsy haiko hoe maninona no tsy mampihetsi-po ahy toy ny taloha ity vaovao ity angamba, satria ny Linux Mint dia ...
SLAX 7 RC1 Azo alaina
Slax, ilay distro azo entina angano mifototra amin'ny Slackware, dia azo alaina ho an'ny fisintomana, Afaho ny kandidà 1, izay ...
Kubuntu sy Xubuntu, vokatra roa nohatsaraina sy natolotra
Manana zavatra mazava be aho: hatramin'ny nanombohan'ny Kubuntu sy Xubuntu nitazona ny The Community, dia lasa ...
Navoaka i Slackel KDE 4.9.2, ary manontany tena ianao ... inona ity? 🙂 Amin'ny anarany no ahafahantsika maminavina fa ...
Hisolo ny GNU / Linux ve ny GNU / Hurd?
Androany aho dia namaky ireo bilaogy voalohany ary namaky zavatra izay nilaza ara-bakiteny hoe "Ity ve ny ...